सीको भ्रमणमा नेपालका एजेण्डा : रेल, सुरुङ र ट्रान्समिसन लाइन – Nepal's No. 1 Digital Newspaper, Business News, Tourism News, Sports News, Entertainment News, Tourism Year 2020, digitalkhabar.com …express media network
Home / राजनीति / सीको भ्रमणमा नेपालका एजेण्डा : रेल, सुरुङ र ट्रान्समिसन लाइन
सीको भ्रमणमा नेपालका एजेण्डा : रेल, सुरुङ र ट्रान्समिसन लाइन
By digitalkhabar on २३ आश्विन २०७६, बिहीबार १५:३१
२३ असोज, काठमाडौं । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणका क्रममा नेपालले रेल, सुरुङ र ट्रान्समिसन लाइनलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने भएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणमा सी २५ असोजमा काठमाडौं आउनेछन् ।
दुई देशका राष्ट्रपतिबीच त्यही दिन भेटवार्ता हुनेछ । राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच प्रतिनिधि मण्डलसहित वार्ता हुनेछ । लगत्तै दुई देशबीच विभिन्न सम्झौता तथा समझदारीहरुमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ ।
के–के छन् नेपालका एजेण्डा ?
उनका अनुसार नेपालले मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सरकारी स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति सीको भ्रमणका क्रममा काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गबारे नयाँ घोषणा हुन सक्छ । सम्भवतः चिनियाँ लगानीमा रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको घोषणा गर्ने तयारी छ ।
यो रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन पनि चीनले नै गरेको थियो, जसले रेलमार्ग निर्माण गर्न सकिने तर जटिल भौगोलिक क्षेत्र रहेकाले निकै कठिन रहेको देखाएको छ ।
सडक सञ्जाल अन्तरगत अरनिको राजमार्गको स्तरोन्नती र रसुवागढी–छहरे–काठमाडौं टनेल एजेण्डामा छन् ।
नेपाललाई चीनसँग जोड्ने अरनिको राजमार्ग महाभूकम्प ०७२ ले क्षतिग्रस्त भएको थियो । यसलाई दुई लेनमा स्तरोन्नती गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ ।
मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयलाई सहयोग गर्नेबारे समझदारी हुनेछ । मनवानपुरमा बनाइने यो विश्वविद्यालयका लागि चीनले सहयोग गर्ने तयारी छ ।
‘भ्रमण ऐतिहासिक हुनेछ’
सरकारले २३ वर्षपछि हुन लागेको चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणलाई ऐतिहासिक बनाउने बताएको छ । ‘भ्रमणलाई पूर्ण सफल र ऐतिहासिक बनाउनुपर्छ भन्नेमा सिंगो राष्ट्र एकमत छ’ सरकारका प्रवक्ता बास्कोटाले भनेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले गरेको छलफलमा पनि सबैले सीको भ्रमणलाई ऐतिहासिक बनाउन र दुई देशका नेताहरुबीच पूर्ण विश्वासको सम्बन्ध स्थापित गर्न सुझाव दिएको उनले सुनाए ।
भ्रमणका एजेण्डाबारे प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार बिहान पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री र विज्ञहरुसँग छलफल गरेका थिए ।
सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले भने, ‘यो भ्रमणलाई नेपाल सरकार र नेपाली जनताले भव्यतापूर्वक सफल र परिणाममुखी बनाउने आशा र विश्वास गरेका छन् ।’
Related ItemsBusinessChinaDigital KhabarInternationalInternational BusinessNepalWelcome GateXi Ping
← Previous Story प्रधानमन्त्रीले भोलि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुसँग परामर्श गर्ने
Next Story → सीको स्वागतका लागि चिटिक्क काठमाडौं